Dowladdda oo ka hadashay Shirka Guddiga Farsamada ee Baydhabo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowladdda oo ka hadashay Shirka Guddiga Farsamada ee Baydhabo
Guddoomiyaha Guddiga Farsamada dowladda Federaalka, dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir Wasiir Saalax Axmed Jaamac ayaa faah faahin ka bixiyay Shirka shalay guddiga uga furmay Magaalada Baydhabo ee Caasimadda KMG ah ee Koonfur Galbeed.
Guddoomiye Saalax Axmed oo warbaahinta la hadlay ayaa waxaa uu sheegay in shirka looga hadlayo qodobadii lagu mari waayay shirkii Madaxda dhawaan ku yeesheen Magaalada Dhuusamareeb ee natiijo la’aanta kusoo dhammaaday.
Waxaa uu sheegay Wasiir Saalax Axmed in shirka sigaar ah looga doodayo sidii loo xalin lahaa saddexda qodob ee khilaafka uu ka taagan yahay doorashada, kuwaasi oo kala ah arrinta Gobolka Gedo ee Maamulka Jubbaland, Guddiyada la magacaabay iyo arrinta Xildhibaanada Gobolada Waqooyi ee Somaliland.
Sidoo kale Guddoomiyaha Guddiga Farsamada ayaa waxaa Carabka ku dhuftay in horumar laga gaaray maalintii 1-aad ee shirka Guddiga, isla markaana ay ka shaqeyn doonaan sidii loo fulin lahaa heshiiskii 17-kii September lagu gaaray Muqdisho.
Isaga oo sii hadlaayay Guddoomiye Saalax Axmed Jaamac ayaa waxaa uu tilmaamay inay ka go’an tahay inay dalka ka dhacdo doorasho heshiis lagu wada yahay, isla markaana uu rajo wanaagsan ka qabo shirka Guddiga uga furmay Magaalada Baydhabo.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicaiis Xasan Maxamed Lafta-gareen oo xalay kulan la qaatay Guddiga Farsamada ee dowladda Federaalka, dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ayaa kula dardarmay fulinta heshiiskii laga gaaray doorashada dalka.
Madaxweyne Lafta-gareen oo kulan xasaasi la qaatay Guddiga Farsamada
Hay’addaha amniga DDS oo kulan ka yeeshay la-dagaalanka Al-shabaab